टिभिएसका बाइक युवाले खोजेजस्तै छन् - Naya Patrika
टिभिएसका बाइक युवाले खोजेजस्तै छन्
टिभिएस मोटरसाइकलको मजबुती पक्ष के हो ?
टिभिएसको रेसिङ इतिहास हेर्दा ३५ वर्ष नाघेको छ । टिभिएस नै यस्तो एउटा मात्र भारतीय मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी हो, जसले डकारजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रेसिङ प्रतियोगितामा सहभागिता हुने क्षमता राख्छ । अपाचे सिरिजअन्तर्गत २ सय सिसीसम्म टिभिएसले युवाको मत जित्न सफल भएको छ । २.९३ सेकेन्डमा सय किलोमिटरको गति समात्न सक्ने क्षमता छ ।
विक्रम पाैडेल, सिनियर मार्केटिङ म्यानेजर , जगदम्बा माेटर्स
बलियो इन्जिनका साथै पावर र पिकअपमा धेरै राम्रो पर्फमेन्स दिन सक्छ । नेपाली बजारमा १६० सिसीको अपाचे थियो र हामीले भर्खरै १६० सिसीमा फोरभी प्रविधिको अपाचे ल्याएका छौँ । २०० सिसीमा फोरभी प्रविधिकै अपाचेले लोकप्रियता पाइरहेको छ । १८० सिसीको अपाचे पनि पहिलेदेखि नै बजारमा उपलब्ध छ । युवापुस्तालाई लक्षित गरी टिभिएसका बाइक उत्पादन भइरहेका छन् ।
अहिले ३१० सिसीको नयाँ बाइक ल्याउनुभएको छ । यसको आवश्यकता किन पर्‍यो ?
हामीसँग २०० सिसीसम्मको बाइक मात्र उपलब्ध छ । यस्तो अवस्थामा केही बढी पावरको बाइक युवाले खोजिरहेका छन् भन्ने देखियो र सोहीअनुसार ३१० आरआर बाइक ल्याएका हौँ । यो पनि अपोच सिरिजकै बाइक हो । तर, यसमा अहिलेसम्मकै आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिएको छ ।
बजारले जुन किसिमको अपेक्षा टिभिएसबाट गरेको छ, त्यसलाई नयाँ बाइकले पूरा गर्न सक्षम छ । बढी सिसीको भएकाले धेरै संख्यामा त बाइक नबिक्ला तर युवाले अपाचे सिरिजमा २०० भन्दा बढी क्षमताको बाइक चलाउन खोजेको चाहनालाई पूरा गर्नेछ ।
३ सय सिसी सेग्मेन्टमा अन्य धेरै ब्रान्डका बाइकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । तसर्थ, ३१० आरआर यो भिडमा कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
यो बाइक धेरै समयको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टबाट उत्पादन गरिएको हो । र, बजारले पनि प्रतीक्षा गरिरहेको प्रोडक्ट हो । बजारमा अब्बल ठहरिनकै लागि हामीले प्रतिस्पर्धी मूल्य ७ लाख ७९ हजार ९ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेका छौँ । एड्भान्स फिचर पनि धेरै राखिएको छ । युवाले खोजेको सबै फिचर यो बाइकमा पाउन सकिन्छ । कलर पनि युवाले रुचाउने किसिमको छ । एन्टिलक ब्रेकिङ सिस्टम राखिएको छ ।
कुन वर्गका युवालाई बाइक बिक्रीका लागि लक्षित बनाउनुभएको छ ?
हामीले पेसाकर्मीभन्दा सौखिन युवा वर्ग ३१० आरआरको उपभोक्ता हुन सक्छन् भनेर वर्गीकरण गरेका छौँ । जसलाई रेसमा बढी रुचि छ र पावर ज्यादै भएको बाइकको खोजीमा छन्, त्यस्ता युवाले ३१० आरआर रोज्न सक्छन् । अपाचेले पहिलेदेखि रेसिङ ट्र्याकलाई आधारित बनाएर बाइक उत्पादन गरिरहेको छ ।
अटो सोमा टिभिएसको स्टलमा अरू कुन–कुन बाइक राख्नुभएको छ ?
बजारले धेरै खोजेको ३१० आरआरलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर प्रदर्शनी गरिएको छ । केही समयअघि मात्रै सार्वजनिक गरिएको १६० फोरभी पनि स्टलमा पाउन सकिन्छ । बुधबार १२५ सिसीको पूर्ण रूपले डिजिटल स्कुटर सार्वजनिक गर्न लागेका छौँ ।
टिभिएसले उपभोक्तालाई सन्तुष्टि दिन के–कस्ता काम गर्दै आएको छ ?
हामीले नेपाली उपभोक्ताको क्रयशक्तिलाई ध्यान दिएर मूल्य तय गर्दै आएका छौँ । बिक्रीलाई मात्र हामीले जोड दिएका छैनौँ, देशभर सर्भिस नेटवर्क बनाएका छौँ । सुगम–दुर्गम सबै ठाउँमा पार्टपुर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, डिलर स्थापना गर्नेलगायतका काममा ध्यान दिएका छौँ ।
बलियो इन्जिन अपाचेको विशेषता नै हो । किनभने, केही यस्ता युवा सर्भिस सेन्टर पुगेका छन्, जसले ६०–७० हजार किलोमिटरसम्म बाइक दौडाउँदा पनि इन्जिन खोलेका छैनन् । टिभिएसले उपभोक्ताको पैसाको मूल्य बुझेको छ । त्यसैले दिगो समयका लागि हुने उत्पादन बजारमा पठाइरहेको छ ।